Paska - Howling Pixel
Ny Paska teo amin’ny Fiangonana tany amboalohany
Ny datin’ny Paska
Tantaran’ny datin’ny Paska kristiana
Ny Paska araka ny Baiboly
Ny Paska araka ny Testamenta Taloha
Ny Paska ao amin’ny Testamenta Vaovao
Araka ireo Epistily
Araka ireo Filazantsara
Ny hevitry ny fiangonana sasany ny amin’ny fankalazana ny Paska
Ny Quakers sy ny Kongregasionalista ary ny Presbiteriana
Ny Restored Church of God
Ny Vavolombelon’i Jehovah
Ny Religious Society of Friends (Quakers)
Ny Anarana Masina sy ny Fiangonana Velon’Andriamanitra
Ny fahababoana tany Asiria na sesitany tany Asiria dia fotoana teo amin'ny tantaran'i Israely taloha sy i Joda izay nanaovan'ny Asiriana sesitany olona israelita anarivony avy tao amin'ny Fanjakan'i Israely avaratra (Samaria). Isan'ireo famindram-ponenana maro izay nataon'ny Empira asiriana vaovao izany. Ny Fanjakan'i Israely avaratra dia babon'ilay mpanjakan'i Asiria atao hoe Teglatfalasara III (na Tiglato-pilesera) sy i Salmanazara V (Salmanesera). Ny mpanjaka asiriana faramparany, dia i Sargona II sy ny zanany mpandimby azy Senakeriba, dia tompon'andraikitry ny fiafaran'ny roapolo taona naharava ny Fanjakan'i Israely any avaratra nonenan'ny foko folon'i Israely, na dia tsy afaka nandrava ny Fanjakan'i Jodà any atsimo aza izy ireo. Natao fahirano i Jerosalema nefa tsy azon'ny mpanao fahirano. Ireo foko nataon'i Asiria sesitany no atao hoe "Foko folo very" taty aoriana.
Ny fiteny tahisiana dia fiteny aostroneziana iray tenenina any Tahiti.
Anisann'y fiteny tahisiana izy io, izay fiteny polineziana. Ny vondron-teny misy azy dia ny fiteny polineziana tatsinanana, izay niparitaka erak'i Polinezia avy teo amin'ny tambanosin'i Samoa. Ny fiteny hafa ao anatin'io vondrona misy ny fiteny tahisiana io dia ny fiteny maori, ny fiteny rapa nui (fitenin'ny nosin'i Paska) ary ny fiteny hawaianina.
Ny toerana itenenana ny fiteny tahisiana dia ny Îles de la Société ary any Tahiti indrindra indrindra.
Ny fitsanganan'i Jesoa ho velona na fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia isan'ireo tenim-pinoana (na dogma) fototra eo amin'ny teolojia kristiana sy ny kristolojia izay ivony. Izao no voasoratra ao amin'ny literatiora tranain'ny kristianisma, ny Epistola voalohan'i Paoly: "Ary raha tsy nitsangana tamin'ny maty i Kristy dia foana ny finoanay" (Korintiana voalohany 15.14). Izany tenim-pinoana izany dia manambara fa i Jesosy avy any Nazareta dia nitsangana tamin'ny maty tokoa tamin'ny andro fahatelo aorian'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny fanekem-pinoana nikeana (na niseana) no ahitana indrindra izany tenim-pinoana izany.
Araka ireo Evanjely, taorian'ny nanomboana an'i Jesosy araka ny didin'i Pontio Pilato, sy taorian'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, dia nalevina i Jesosy. Roa andro taorian'izany dia hitan'ireo vehivevy namangy ny fasana, indrindra i Maria Magdalena, fa nikodia niala ny vato nanidiana ny fasana izay lasa foana. Niseho tamin'ny mpianany maro i Jesosy taorian'izany, isan'izany ireo Apostoly (jereo: 1Kor. 15. 5-6).
Ankalazain'ny Kristiana izany fitsangan'i Jesosy tamin'ny maty izany amin'ny Alahadin'ny Paska, izany hoe telo andro aorian'ny Zoma masina, izay ahatsiarovana ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe amin'ny fanavotana izany fitsanganan-ko velona izany ho an'ny Kristiana.
Ny Kristianisma tandrefana dia ny fitambaran'ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana Protestanta ao amin'ny tapany andrefan'ny Kontinentan'i Eoropa sy ny Kontinentan'i Amerika ary i Afrika ka hatrany Aostralia. Nanomboka tamin'ny nielezan'ny fivavahana kristiana taorian'ny taonjato faha-16 taty Afrika sy tany Oseania dia tsy tena voafaritra ara-jeografia ny hoe "Kristianisma tandrefana" fa ara-pirehan-kevitra na ara-teolojia sy araka ny fiavian'ny sampan'ny kristianisma arahin'ny fiangonana resahina.
Tsy mitovy ny fiheveran'ny Kristiana tatsinanana sy tandrefana ny amin'ny fahotana lovana sy ny amin'ny fivoahan'ny Fanahy Masina ary ny fotoam-pankalazana ny Paska. Tsy mitovy koa ny tetiandro ampiasaina satria ny Tandrefana mampiasa ny tetiandro gregoriana fa ny Tatsinanana kosa mampiasa ny tetiandro joliana. Tsy mitovy koa ny fotoana ankalazana ny Noely. Ny Kristiana tandrefana no mitana ny laharana voalohany raha ny habetsahan'ny mpino no jerena satria mahatratra 90%n'ny isan'ny Kristiana maneran-tany.
Madagasikara na Repoblikan'i Madagasikara (anarana ofisialy) dia firenena ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Fitambarana nosy i Madagasikara raha amin'ny lafin'ny firenena no jerena. Madagasikara ihany koa no iantsoina ilay nosy malagasy lehibe miendrika tongotra havia. Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an-tany ny nosy Madagasikara. Toerana fonenan'ny 5%-n'ny biby sy zavamaniry misy eto amin'izao tontolo izao; ka mihoatra ny 80%-n'ireo dia Madagasikara irery ihany no manana azy (na ahitana azy eto an-tany).
Voasokajy ao anatin'ireo ny Gidro sy ny Rajako isankarazany, ny fosa, ny fianakaviam-borona telo (3) sy zava-maniry toy ny Renala izay ahitana sokajy karazany valo (8) izay tsy hita amin'ny toeran-kafa ny enina (6).
Ny Noely na Krismasy dia andro firavoravoana kristiana izay ankalazana sy ahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesoa Kristy. Aorian’ny Paska (na Paka) dia ny Noely no andro fety manan-danja indrindra amin'ny alimanakan'ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana. Ny andron'ny Noely anefa dia tsy fitsingerenan'ny andro nahaterahan’i Jesoa fa daty nifanarahana fotsiny hanaovana ny fankalazana. Ny fiangonana katolika sy ny fiangonana protestanta dia mankalaza ny Noely amin'ny 24 sy 25 Desambra. Tsy misy soratra ao amin'ny Baiboly izay mandidy mivantana ny fankalazana ny Noely. Noho izany dia ao ireo fiangonana mankalaza ary ao koa ireo tsy mankalaza izany.
Ny Pentekosta na Pentekôty dia fety kristiana ahatsiarovana sy ankalazana ny nidinanan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly tamin’ny faha-50 andro taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Amin’ny Alahady fahafito aorian’ny Paska no anatanterahana azy. Io fety io no mamarana ny fetin’ny Paska.
Ny Shavuot (hebreo: שבועות "herinandro") na Pentekosta na Pentekôty dia fety ao amin'ny jodaisma ahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay na Sinaia sy ankalazana ny fijinjana ny varimbazaha (atao hoe koa "Fetin'ny lohavokatra"). Ankalazaina amin'ny 6 Sivan ny Shavuot.
Ny Sederan'ny Paska na Sedera dia fombafomba ao amin'ny fivavahana jiosy mifamatotra amin'ny hevitra ara-tandindona miaraka amin'ny fetin'ny Paska jiosy, izay mikendry ny fampiainana ny mpandray anjara, indrindra ny zaza, ny fahazoana tampoka ny fahafahana taorian'ny taona maro nahandevozan'ny Zanak'i Israely tany Egipta, izany hoe ny fivoahan'ny Zanak'i Israely avy tao Egipta. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe סדר / Seder izay mlidika hoe "filaminana" izany. Anaovana sakafo sakafo fito ny Sederan'ny Paska.
Amin'ny faha-14n'ny volana Nisàna no ankalazana ny Sedera ao amin'ny tanin'i Israely, fa any amin'ireo Jiosy am-pielezana dia amin'ny faha-14 sy faha-15n'ny volana Nisàna no anaovana izany, araka ny Hagadà novolavolaina nandritra ny taonjato maro. Ao amin'ny Misnà no ahitana ny foibem-panorenana io fomba io. Naka ampahany tamin'ny fomba fanao babiloniana koa izany nandritra ny vanimpotoan'ny Amoraima sy ny Geonima, ka nanaovana fandraiketana an-tsoratra nandritra ny Andro Antenantenany sady notovanana tamin'ny hira maro tamin'ny taonjato faha-16. Taty aoriana dia samy manana ny fivoasany azy ny Jiosy sionista sy ny Jiosy komonista.
Ny Sim'hat Torah (hebreo: שמחת תורה / "hafalian'ny Lalàna") dia fety jiosy ankalazana ny Torah ("Lalàna") ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy. Tanterahina amin'ny 22 sy 23 Tishri izany fety izany.
Ny Tu bi-Shevat (hebreo: ט"ו בִּשְׁבָט na חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט / "dimy ambin'ny folo andron'ny Shevat") dia fety jiosy ankalazana ny taom-baovaon'ny hazo izay tanterahina amin'ny 15 Shevat.